Louie Giglio - Biography ye Passion City Church Pastor
Chitendero & Kunamata Kuvaraidza
Passion City Church Mufundisi Anofamba Sezvaanotungamirirwa naMwari
Louie Giglio akabuda kubva pamhemberero yekuvhura mushure mekuda kwemhirizhonga.
Louie Giglio anoti ari kufamba mumatanho ehupenyu hwake apo Mwari anotungamira.
* Mufudzi weAtlanta's Passion City Church inofamba mberi pachikamu chepasi pose nekukoka kukupa kubvuma panguva yekuvhurwa kweMutungamiri weBarack Obama musi waJanuary 21, 2013.
Kuna Giglio, kukudzwa uku kwaiva imwezve mukana we "kuita Jesu Kristu mukurumbira." Giglio anobvuma kuti Kristu atova akakurumbira pasi pose, asi ane motokari yekubatanidza vechidiki nevane vhangeri reevhangeri.
Chikamu chekutanga muupenyu hwaGiglio chakaitika paakanga ari mutsva paGeorgian State University muna 1977. Akasarudza rimwe mangwanani mangwanani maviri kuti ave kupa upenyu hwake kuna Kristu panzvimbo yehupenyu hwekambani.
Izvozvo zvakaita kuti aende kunzvimbo inotevera, Southwestern Baptist Theological Seminary kuFort Worth, Texas, kwaakagamuchira Master of Divinity Degree. Muna 1985, Giglio nemudzimai wake Shelley vakatora izvo zvaiita sechinhu chiduku panguva iyoyo, asi pakupedzisira yakakura kuva imwe danho guru rehupenyu hwake.
Choice Ministries Inoziva Zvinoda
Giglio akanga achangobva kupedza seminari. Iye nemudzimai wake vakasarudza kuitisa chidzidzo cheBhaibheri chevhiki nevhiki kuBaylor University, muWaco, Texas. Pakutanga vadzidzi vashoma vakapinda.
Vakadana chirongwa che Choice Ministries. Mune hurukuro naJohn Piper , Giglio akati vadzidzi vakapararira shoko uye kudzidza kwakatanga kukura, kubva kune gumi nemaviri kusvika kumazana mashoma, kusvika kune chiuru, kusvika kune vanhu 1 600.
Mushure memazana emakore apfuura, gumi kubva muzana yeBaylor mudzidzi wechikoro vaipinda chidzidzo chevhiki nevhiki.
Nguva yose iyi, Giglio aida kuenda kumba kuAtlanta kuti ave nemhuri yake. Baba vake vairwara zvakanyanya uye mai vake vakanga vaneta nokumuchengeta. Giglio akati akanzwa Mwari "kumusunungura" kubva pakudzidza Bhaibheri muna 1995.
Baba vaGiglio vakafa kubva kuhutachiona hwekutapukira pamberi paLouie. Ari ndege kubva kuWaco kuenda kuAtlanta, Louie Giglio akati Mwari akamutungamirira kune imwe nhanho muupenyu hwake.
Kushushikana Misangano Zvinosangana Nezvinodiwa
Giglio akanzwa akashevedzwa kuti ape kuungana kukuru kwevadzidzi vekoroji, uye Passion Movement yakatanga. Musangano wekutanga, wakaitwa muAustin, Texas muna 1997, wakapedza mazuva mana.
Mamwe Passion Misangano yakatevera. Mutungamiri weJanuary Passion 2013 muAtlanta akaunganidza vaduku vanopfuura 60 000 kubva pa18 kusvika ku25, vachimirira nyika 54 uye vanopfuura 2 000 makoroji nemayunivhesiti.
Munguva ye2012 Passion Conference, sangano rakamutsa $ 3.2 mamiriyoni kurwisana nekutengesa kwevanhu, kusanganisira basa rekumanikidzirwa, kubasa vana, nekutengesa zvepabonde. Gore rino Passion 2013 vakauya vakapika kuti "vaipedze" nekupa kudarika $ 3.3 mamiriyoni kune Freedom Freedom.
Passion City Church Ndiyo Mutsva Wekupedzisira
Giglio nemudzimai wake vave vave nhengo dzeNot Point Point Church muAtlanta, dzakapiwa naAndy Stanley. Muna 2009, Giglio akati akaendeswa kudyara chechi muAtlanta. Izvozvo zvakazova Passion City Church.
Mukuwedzera kuna Giglio semufundisi mukuru, chechi inosanganisirawo Chris Tomlin . Tomlin mumwe wevanyori paixstepsrecords, zita rakagadzirwa naGiglio muna 2000.
Zvimwe zvechiKristu vanyori vemurairi vanosanganisira David Crowder Band , Matt Redman , Charlie Hall, Kristian Stanfill, naKristuy Nockels.
Giglio akanyora mabhuku akawanda echiKristu ( Mweya IKufuridzira, Handizi asi Ndinoziva Kuti Ndiri, Wired: Kuti Upenyu hweKunamata ) uye nziyo dzinoverengeka dzekunamata dzinosanganisira "Indescribable" uye "Mwari Mukuru Sei?"
(Sources: Atlanta Journal Constitution, Desiringgod.org, Christianitytoday.com, uye cbn.com.)
Jack Zavada, munyori wemabasa uye mupiro weMexico.com, anogumira kune webhusaiti yechiKristu ye singles. Asati akaroora, Jack anonzwa kuti zvidzidzo zvakaoma zvaakadzidza zvinogona kubatsira vamwe vasiri vechiKristu vanonzwisisa hupenyu hwavo. Zvinyorwa zvake uye eebhuku zvinopa tariro huru nekukurudzira. Kuti utaure naye kana kuti mamwe mashoko, enda kwaJoo Page Page .
Nzira Yokutanga Nayo Muparidzi weMimhanzi
Top 10 Zvinyorwa zve "O Little Town yeBheterehema" neChristian Artists
Ndiani anoimba muKristu song "Forever?"
Nziyo dzechiKristu kune nguva dzakaoma
Pamusoro 40 Nziyo dzechiKristu dzegore ra2011
Tsamba Yakazarura kuna Jason Morales kubva kuna Baba Vake
Ungana naMat Maher
Mufundisi Danny Hodges
10 Great Books pa Bhagavad Gita
Mavara Akawanda Akaenda Sei Pashure Penguva?
Piao Liang, achiti "Akanaka" muchiMandarin Chinese
5 Mabhuku Anokosha Pamusoro peAfrica Mukadzikadzi
Sei Kuparara Kwemagetsi Kuitika Kunoitika?
Rangana Neimwe yeAstronomy's Wild Men: Tycho Brahe
"Hupenyu Hunoshamisa" uye Mararamiro Atinoita
Nzira dzekudzidzisa Kunyora
Dzorerai Spark Plugs Yako
UIC GPA, SAT uye ACT Data
Basa reCytoplasm mune imwe Cell
Rudo Runozivikanwa uye Mafaro Akanaka
7 yeZvakanaka ZviKristu Zororo
Chii Chinonzi Ophiolite?
'Rufu Rurege Kuzvikudza' Quotes
Gloria mu Excelsis Deo: Lyrics to This Ancient Christmas Song
Nhoroondo yeAfrica-American Folk Music
Nzira Yokugadzirisa Mhosva uye Ita Kuchinja Mumvura
Alexander Fleming Anoziva Penicillin